author - चन्द्रकिशोर - कान्तिपुर समाचार
चन्द्रकिशोर, आश्विन २६, २०७४
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबारे कुरा उठान भइराखेको छ । निर्वाचनको तिथि पहिले नै तोकिसकिएको छ । तर बितेका स्थानीय निर्वाचन तथा आउने निर्वाचनमार्फत हुने दलित प्रतिनिधित्वबारे जसरी उच्च तहमा कुरा हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन ।
चन्द्रकिशोर, आश्विन १९, २०७४
सुन त्जुले भनेका छन्, ‘युद्धको सबभन्दा ठूलो कला यही हो कि शत्रुलाई नलडिकनै परास्त गर्न सकियोस्’ । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण एवं चुनावी तालमेल गर्न एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच निर्माण भएको गठबन्धनले पहिलो दृष्टिमा यस्तै सन्देश दिन्छ ।
चन्द्रकिशोर, आश्विन १२, २०७४
मैथिलीमा एउटा शब्द छ, ‘सेहन्ता’ जसको अर्थ हुन्छ, चाहना वा लालसा । भोजपुरीभाषीहरू स्थानीय तह चुनावका बारेमा भन्दै थिए, ‘उम्मिद के स्थानीय तह, उत्साह के मत ।’ आशय थियो, स्थानीय तहबाट निकै आशा गरिएको छ, त्यसैले पो मतदानमा उत्साहजनक सहभागिता रह्यो ।
चन्द्रकिशोर, आश्विन ७, २०७४
रामनारायण मिश्रलाई आस्थाको प्रतीक मान्नेहरूको ठूलो जमात छ । उनको जीवनकहानी, उनका विचार, उनका जीवनमूल्यलाई हेरेका, बुझेका र सुनेकाहरूमा उनीप्रति दह्रिलो आस्था विकसित हुन्छ र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
संविधानमा अपनत्वको पर्खाइ
चन्द्रकिशोर, आश्विन ५, २०७४
‘नेपालमा लोकतन्त्र किन टिक्दैन ?’ यो प्रश्न फेरि नेपाली समाजमा आफ्नो अनुभव, अनुभूति र दृष्टिकोणका आधारमा तेर्सिन थालेको छ । आखिर कसले टिकाउँछ, लोकतन्त्र ? वा कसरी बन्छ, उन्नत लोकतन्त्र ? राज्यले वरण गरेको पद्धतिले समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ कि लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाले पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ ?